कालीगण्डकीमा पानीको बहाव बढ्यो ः सचेत हुन आग्रह
पर्वत, २० साउन (रासस) ः केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण पर्वत जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढेको छ । कालीगण्डकीको मुहान मुस्ताङको तल्लो भागदेखि
नेपाली काँग्रेस स्याङजाका जिल्ला सभापतिको निधन
काठमाडौं । साउन २० । नेपाली काँग्रेस स्याङजा जिल्ला सभापति एवं पुर्व सभासद कमल पंगेनीको निधन भएको छ । खाना खाएर सुतेका पंगेनीको ह्ृदयघातका कारण निधन
नेपाल तान डोरी संघको दोश्रो अधिबेशन सम्पन्न,अध्यक्षतामा पौडेल निर्विरोध चयन
काठमाडौँ । नेपाल तान डोरी संघको दोश्रो अधिबेशनले भवानी प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति शनिबार निर्विरोध चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा सूर्यबहादुर भट्टराई र सुभाषश्री
आज बिहानै पहिरोले तीन घर पुरिए
जाजरकोट, २० साउन (रासस) ः जाजरकोट भेरी नगरपालिका–३ ठाँटीबजारदेखि पानी नाउँला जाने सडकमा आज बिहान पहिरो जाँदा तीन घर पुरिएका छन् । सदरमुकामको मुख्यबजार रहेको ठाँटीबजारदेखि
जिप दुर्घटनामा दुई बेपत्ता, उद्धारमा समस्या
पाल्पा, २० साउन । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–६, ठिमुरेमा हिजो साँझ जिप दुर्घटना हुँदा दुई जना बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा तानसेन नगरपालिका–१० का २५ वर्षीय विवेक
रमेश लम्साल काठमाडौँ, १९ साउन (रासस) ः सरकारले कलंकी–नागढुंगा, चाबहिल–जोरपाटी सडक आगामी भदौ १५ गतेभित्र कालोपत्र गरिसक्ने भएको छ । पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुलो उडेर
हजको कोटा १२ सयमै सीमित
गंगा बराल . काठमाडौं । साउन १९ । साउदीको मक्कामदिनामा हज गर्न जाने नेपालीको संख्यामा यसपालि पनि वृद्धि गरिएन । सधैंको जस्तै १२ सयको कोटा निर्धारण गरिएको
अम्बेड्करले देखाएको बाटो अझैपनि अर्थपूर्ण – जयगडी
काठमाडौं । अम्वेड्कर मिसन नेपालका अध्यक्ष मनोज जयगडीले बाबासाहेव अम्वेड्करले देखाएको बाटो र लिएको सिद्धान्त अझैपनि सान्दर्भिक भएको बताएका छन् । उनले अम्बेड्कर भारतको संविधान निर्माणका पिता
काठमाडौँ, १९ साउन ः देशभर अहिलेसम्म करीब ९० प्रतिशत धान रोपाइँँँ सम्पन्न भएको पाइएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले यही साउन १७ गते बिहीबारसम्म संकलन गरेको अभिलेखअनुसार
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय ग¥यो
काठमाडौँ, १९। साउन (रासस) ः मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा परियोजना कार्यान्वयनका निम्ति विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गर्ने र त्यस
यो नारा जुलुस गर्ने समय होइन–प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, १८ साउन (रासस) ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले अबको समय नारा जुलुसमा नबिताएर विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशका सांसदसँग आज सिंहदरबारमा
यो वर्षको मनसुन सुरू भएता बाढी पहिरोबाट १८० को ज्यान गयो
काठमाडौं । साउन १८। यो वर्षको मनसुन सुरू भएता बाढी पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट १ सय ८० जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार
राज्यमन्त्रीलाई पक्रन उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । साउन १८। सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा संलग्न भएका आरोपितलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत धनुषाले परमादेश जारी गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरी जलेश्वरमा
काठमाडौँ, १८ साउन (रासस) ः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक शुक्रबार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्न उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवाद गर्नुहुने भएको
काठमाडौँ, १७ साउन (रासस) ः शेयर बजारमा आज सामान्य गिरावट आएको छ । शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज २.५६ बिन्दुले घटेर एक हजार १९१.३१ बिन्दुमा पुगेको
हत्यारा र अपराधीलाई कठोर कारवाही हुन्छ ः गृहमन्त्री थापा
काठमाडौँ, साउन १७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना र सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको हमलाका सम्बन्धमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा
काठमाडौँ, साउन १७ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भागमा महिला हिंसाका घटना बढेको भन्दै सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक
काठमाडौँ, साउन १७ । दोलखाको नाम्दु आसपास केन्द्रबिन्दु भएर आज गोरखा भूकम्पको परकम्प गएको छ । दिउँसो २ बजेर ३२ मिनेट जाँदा ४.२ रिक्टर स्केलको परकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन
नुवाकोट, साउन १७ । विदुर नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको दर कटौती गरेको छ । बुधबार प्रकाशित गरेको स्थानीय राजपत्रमा नगरपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन अनुसार नगरपालिकाले लगाउने भनी
चितवन, १७ साउन (रासस)ः नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डका दुई ठाउँमा परिहो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार आज बिहान ४ बजे घुमाउने र जलबिरेमा
काठमाडौंको प्रहरी बृत्त लैनचौर, कालीमाटी, गौशालाका प्रहरी प्रमुख सहित २८ जिल्लाका ९५ डिएसपीको सरुवा
रबिन थपलिया काठमाडौं । साउन १७ । काठमाडौंको प्रहरीबृत्तहरु लैनचौर, कालीमाटी, गौशाला, किर्तिपुर, जगातीका प्रहरी इन्चार्ज सहित २८ जिल्लाका ९५ डिएसपीहरुको सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान
१५ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहित नेपाल प्रहरीका ७५ एसपीको सरुवा, कस्को सरुवा कहाँ ?
रबिन थपलिया काठमाडौं । साउन १७ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १५ जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहित नेपाल प्रहरीका ७५ एसपीको सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत
पूर्वसांसद सदा सम्मानित
राजविराज, साउन १७ । पूर्वसांसद तथा दलित र भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा असर्फी सदा ‘वैद्य–प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार, २०७५’ बाट सम्मानित हुनुभएको छ । सप्तरीको राजविराजस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा बुधबार आयोजित
काठमाडौँ, साउन १७ । संसदीय सुुनुवाइ समितिलेको आजको बैठकले मंगलबार बेलुका सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको निन्दा गर्दै सांसदहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका
संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालाबारे छानबिन समिति गठन
काठमाडौँ, साउन १७। सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेको र उहाँमाथि परेका विभिन्न आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न
Pages 248 : You are at page 102 of 248